Act-On: Chinangwa-Chakavakwa, SaaS, Cloud-Yakavakirwa Kushambadzira Kushambadzira | Martech Zone
Muvhuro, September 11, 2017 Chitatu, September 13, 2017 Douglas Karr
Kushambadzira kwemazuva ano kushambadzira kwedigital. Hupamhi hwayo hupamhi hunowedzera uye hwakawanda maitiro, inotungamira chizvarwa uye nzira dzekurera, uye yevatengi lifecycle optimization uye mapurogiramu ekukurudzira. Kuti ubudirire, vashambadziri vanoda dhijitari yekushambadzira mhinduro inokwanisa-kupfuma, inochinjika, inoshanda pamwe nemamwe masisitimu uye zvishandiso, intuitive, nyore kushandisa, inoshanda uye inodhura.
Uyezve, zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvemabhizimusi pasi rese zvidiki; ndozvakaitawo zvikwata zvavo zvekushambadzira. Nekudaro, yakawanda kwazvo yekushambadzira otomatiki mhinduro haina kugadzirirwa kusangana nezvinodiwa nemasangano madiki kana zvikwata zvidiki zvekushambadzira zvinowanzo kuwanikwa mukati memabhizinesi makuru. Makambani anoshandisa kushambadzira otomatiki anoona 90% zvirinani kutungamira kutendeuka.
Act -PaKushambadzira Automation Solution Kuongorora
Chiito-On inopa software-se-se-sevhisi, yegore-yakavakirwa kushambadzira otomatiki mhinduro iyo inobvumidza vashambadziri kusangana nevatengi mhiri kwehupenyu hwevatengi. Chikuva chayo chakavakirwa-chinangwa chekupa makambani madiki nepakati-ese kukosha kweiyo bhizinesi-chikamu chekushambadzira otomatiki system, pasina kuomarara uye zviwanikwa zveIT zvinowanzodiwa.
Iyo Act-On chikuva inobvumidza vashambadziri kuitisa epamberi kushambadzira mishandirapamwe pawebhu, nhare, email, uye zvemagariro Inosanganisira kugona kwe: email kushambadzira, webhusaiti yekutarisa vashanyi, mapeji ekumhara uye mafomu, kutungamira zvibodzwa uye kusimudzira, kushambadzira zvemagariro uye kutsvaga, otomatiki zvirongwa, kuongorora kweA / B, kusangana kweCRM, manejimendi manejimendi uye nezvimwe.
Iine Act-On, kushambadzira kuedza kunogona kuyerwa uye kukwidziridzwa zvichibva pane rakaomarara data pane gut gut kunzwa. Vatengesi vanogona nyore:
Manage uye gadzirisa matanho ese ehukama hwevatengi;
Ipa kushambadzira kushandisa kumari;
Tevedza tarisiro yezvinoitika kubva pakutanga kubatanidzwa uye shanduko kune yakavharwa kutengesa uye dzokorora kutengesa;
Rondedzera pamishandirapamwe, kubva pamatanho akakwirira kusvika kudonhedzo dzakadzama.
Iyo Act-Pachikuva inomira yakaparadzaniswa zvakanyanya nekuda kwekushandisa kwayo pamwe nekusatsanangurika kwayo kwevatengi: vashandisi vanowanzo simudza uye kumhanyisa kwavo kwekutanga mushanduro mumazuva mashoma (masisitimu enhaka anogona kutora mavhiki kana mwedzi) uye vagamuchire rutsigiro rwakazvipira (runhare / email ) pasina imwezve mutengo.
Act-On zvakare yakasarudzika mukugona kwayo kugadzirisa zvinodikanwa nevashambadziri vemazuva ano nekugadzirisa matanho ese erwendo rwevatengi uye nekugonesa kushambadzira kubata ese matanho ehupenyu hwevatengi (kubva pakuziva uye kutora kune chengetedzo yevatengi uye kuwedzera). Pamusoro pezvo, inobvumidza vashambadziri kusanganisa zvirinani-zvekuberekesa zvishandiso nematurusi avanoshandisa kare, saka ivo vane mukana wekugadzirisa avo ekushambadzira mateki kuti akwane avo pachavo ari kuchinja bhizinesi zvido.
Ita-Pane Yekubata Nhoroondo
Chiito-Pane Webhusaiti Yevashanyi Yekutevera
Act-On yekutsvagisa inoratidza kuti zvirongwa zvekushambadzira zvakagadzirirwa zvido zveindasitiri zvinopa mhedzisiro yakakwira zvakanyanya kupfuura izvo zvisiri. Nekuda kweizvi, Act-On nguva pfupi yapfuura yakazivisa kuvhurwa kweAct-On Industry Solutions, iyo inogadzirirwa maindasitiri akasiyana siyana anosanganisira hutano, mafambiro, mari, kugadzira nekutengesa, nezvimwe zviri kuuya. Yakagadzirirwa kuburitsa yakagadziridzwa ROI uye nekukurumidza kugamuchirwa kwekushambadzira otomatiki, Act-On Indasitiri Solutions inopa:
gutsikana - Maindasitiri-akasarudzika matemplate emaemail, mafomu, uye mapeji ekumhara ane yakawanda mishandirapamwe mienzaniso iyo inogona kuunzwa nyore nyore / kutumirwa kunze kune maakaundi;
Chirongwa -Pamberi-yakavakwa otomatiki mafashama ekutsigira akawanda-nhanho ekurera uye ekuita mishandirapamwe;
benchmarks -Kuwanika kune akaunganidzwa ekuita mhedzisiro yezviitiko zvekushambadzira mumaindasitiri akasiyana siyana.
Tora Vhidhiyo Kushanya kweChiito-On
Ita-Pane Kubatanidzwa Kunzwisisa
Engagement Insights chishandiso chekuzivisa chinopa chaiko-nguva mukana wekushambadzira analytics kuburikidza neanotakurika uye anorarama-akagadziridzwa matemplate eGoogle Sheets uye Microsoft Excel.
Kunyangwe kushambadzira-kunotungamirwa nedata kwave kwakakosha kumishandirapamwe mazuva ano, manejimendi manejimendi inoramba iri dambudziko rakakosha kune vazhinji vevatengesi veB2B, sekuongorora kwazvino. Engagement Insights inoita kuti zvive nyore kuona, kutumira kunze uye kugovana dhata, izvo zvinoita kuti vashambadzi vavandudze uye vagadzirise mishandirapamwe yavo uye zvakare inoita kuti data rekushambadzira riwanikwe kune mamwe zvikwata musangano rese.
Kushambadzira Kushandisa Kwakanyanya Maitiro
74% emakambani anotora kushambadzira otomatiki ona yakanaka ROI mumwedzi gumi nemaviri kana zvishoma. Kambani yega yega ichave nezvinangwa zvakasarudzika zvinotsigira yayo chaiyo bhizinesi maitiro, asi kune akagadzwa akanakisa maitiro ayo anogona kubatsira kunyatso shandisa yako kushambadzira otomatiki system:
Gadzira yakarongeka inotungamira manejimendi manejimendi iyo inotsanangura basa uye hukama pakati pezvinhu zvitanhatu zvakakosha zvekushambadzira maturusi nemaitiro: dhata, kuronga kutungamira, kutungamira nzira, kutungamira kufunda, kutungamira kusimudzira, uye metric. Ita shuwa kuti kutengesa uye kushambadzira zvinobvumirana padanho rega, uye shandisa mutauro mumwe chete kuzvitsanangura.
Gadzirisa kushambadzira maitiro uye zvinangwa nebazi rekutengesa. Vatengi vari kupinda mukutengesa fanera gare gare mukuita sarudzo kupfuura nakare kose. Izvi ichokwadi kumakambani maviri eB2B neB2C. Izvi zvinoreva kushambadzira hakugone kungoisa mazita akasimbiswa kubazi rekutengesa.
Iyo yekushambadzira otomatiki raibhurari inofanirwa kusanganisira zvemukati zvinobata mutengi akadzidza, uye sangano rinofanirwa kunge riine mari yakakwana yekubatana netarisiro pavanongoratidza chinangwa chekutenga.
Tarisa kushambadzira otomatiki mhinduro izvo zvinosimbisa maturusi uye kugona kwevatengesi, pane izvo IT zvinodiwa. Kushambadzira otomatiki kunofanirwa kutungamirwa nevashambadzi vehunyanzvi, kwete iyo CIO.
Chiito-On inoshandira anopfuura 3,000 makambani ari muhukuru kubva kumabhizimusi madiki nepakati-ehukuru kusvika kumadhipatimendi emabhizimusi makuru, munzvimbo dzakasiyana maindasitiri (senge mabasa emari, hutano, kugadzira, software, dzidzo uye tekinoroji). Vatengi varipo vanosanganisira Xerox, Swarovski, iyo University yeOhio uye ASPCA, neimwe yeanomanikidza mashandisiro mashandisiro ari LEGO Dzidzo.
Vatengesi vari pasi pekumanikidzwa kupfuura nakare kose kuti vaunze mhedzisiro pane ese mativi ehupenyu hwevatengi. Tekinoroji yedu inopa simba kuvashambadzi kuti vashandise dhata kutyaira zvisarudzo uye iri kugadzirisa zvakare nzira mabrands anoshanda nevatengi vavo. Nekuda kweizvozvo, vatengesi nhasi vanozvidavirira uye vanobudirira, vachipa zvakanangana nekukura kwemari uye kugutsikana kwevatengi. Andy MacMillan, CEO, Mutemo-Pane Software
Kushambadzira Automation Nyaya Yekudzidza - Act-On
Kushanda nevadzidzisi uye manejimendi kubva kuK-6 kugadzira mhinduro uye zviwanikwa zvekudyidzana kudzidza mukirasi, LEGO Dzidzo yakashandura kushambadzira otomatiki mushure mekuona yavo email kushambadzira mhinduro yaisakwanisa kuyera pamwe nekukura kwekambani. Act-On munguva pfupi yakaratidza kukodzera kwakaringana kwezvakasiyana zvinodiwa zveLEGO, nekuda kwekushomeka kwemitengo uye yakasimba kutungamira yekukora kugona, uye yakaiswa kukurumidza kushanda - nekukurumidza ichipa ruzivo mukati meLeGO Dzidzo yekutengesa pombi uye ichibatsira timu yekushambadzira yeboka kuisa zvirinani pamberi pekutungamira kunouya. .
ne Chiito-On, LEGO Dzidzo yakakwanisa kuendesa gumi nemana mishandirapamwe pagore (kumusoro kubva kune epamberi epamhepo email zvirongwa), uye ikozvino inonakidzwa ne 29 muzana kutarisira-kutendeuka-chiyero.
Tags: ab testChiito-Onkuita-pakushambadzirakuita-pakushambadzira otomatikikuita-pane softwarezvoga advertisinggore-based kushambadzira otomatikicrm kusanganayevatengi lifecycle manejimendiEmail Marketingnezvimiropamapejikutungamirira kutarisiralead alamakushambadzira chinongedzokushambadzira mushumo mushumoyepakati-saizi kushambadzira otomatikikusimudziraomnichannel kushambadziradiki rekushambadzira otomatikikutsvaga kwevanhu munharaundakutsikisa munharaundawebinar manejimendiwebhusaiti yevashanyi yekutevera
Zuora: Shandura Yako Inodzokororwa Kubhadhara uye Kunyorera Kushanda